၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို သားမယားပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် အမျိုးသားနှစ်ဦးအား သုဝဏ္ဏရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့် – Eleven Media Group
Posted on August 22, 2018 August 23, 2018 by သန့်ဇင်ကျော်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ၁၇ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို သားမယားပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် အမျိုးသားနှစ်ဦးအား သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သြဂုတ် ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏတွင် နေထိုင်သည့် မ….(၁၇)နှစ် သည် သြဂုတ် ၂၀ ရက် ည ၉ နာရီက သုဝဏ္ဏရှိ ကျူရှင်တစ်ခုသို့ ကျူရှင်တက်ရန် သွားရောက်ခဲ့ရာ အချိန်နောက်ကျနေသဖြင့် တက်ရောက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ သုဝဏ္ဏ (၂၉) ရပ်ကွက်ရှိ ကန်ပေါင်ပေါ်တွင် စက်ဘီးပတ်၍ စီးနင်းနေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ စက်ဘီး စီးနေစဉ် အဆိုပါကန်ပေါင်ပေါ်၌ ထိုင်နေ သည့် လူငယ်ငါးဦးခန့်အား တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ယင်းလူငယ်များထံမှ ရေတောင်းသောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက်ယင်းလူငယ်များ ပေးသည့်ရေကိုသောက်ခဲ့ကြောင်း ၊ ထိုသို့သောက်ပြီးနောက် မ….(၁၇) နှစ်မှာခေါင်းမူးသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါလူများထဲမှ နှစ်ဦးက မ….(၁၇)နှစ်၏စက်ဘီးကို သော့ခတ်ကာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ သော့ခတ်ကာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သဖြင့် သော့ကို လိုက်လံတောင်းယူခဲ့ရာ အဆိုပါလူနှစ်ဦးက ကန် ပေါင်အောက်သို့ ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် ဆက်၍ပြေးလိုက်စဉ် မ….(၁၇)နှစ်မှာ မူးလဲသွားခဲ့ကြောင်း အမှုဖွင့်တိုင်တန်းချက်အရ သိရသည်။
ထိုသို့လဲကျသွားစဉ် အဆိုပါလူနှစ်ဦး က မ…..(၁၇)နှစ်အား အသင့်ရပ်ထားသည့် ဆိုက်ကားတစ်စီးပေါ်သို့ တင်ဆောင်၍ သာကေတမြို့နယ်ရှိ လူမရှိသည့် နေအိမ် တစ်အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သားမယား အဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် မ…..(၁၇) နှစ်မှာ အဆိုပါနေအိမ်၌ နံနက်လင်းသည်အထိ ထိုင်နေခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၂၁ ရက် နံနက် ၆ နာရီတွင် ယင်းလူနှစ်ဦးက ပြန်လွှတ်သဖြင့် ၎င်း၏နေအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ကြောင်း အမှုဖွင့်တိုင်တန်းချက်အရ သိရသည်။
“ကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ လူနှစ်ဦးထဲ က အသက် ၂၁ အရွယ် ကောင်လေးကိုတော့ ဖမ်းမိပါပြီ။ တစ်ယောက်ကိုတော့ မမိသေးပါဘူး။ ခုကောင်မလေးကိုလည်း ဆေးစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ် ဖွဲ့မှရဲအရာရှိတစ်ဦးက သြဂုတ် ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို မ…. (၁၇)နှစ်က သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းဖြစ်သည့် သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းသို့ သွားရောက်
တိုင်တန်းအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ရဲစခန်းက(ပ)၄၈၀/ ၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
Posted in CrimeTagged မုဒိန်းမှု
ကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင် ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ကျော် အကြွေးတောင်းရာမှ မုဒိမ်းမှုဖြစ်ပွားသည်ဟုဆိုကာ ပုဒ်မလေးခုဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရသူများအနက် ငါးဦး အာမခံရထားပြီး အမှုမှာ လိမ်လည်တိုင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသူ မိသားစုဝင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲခံရသူများမှာ ခုနစ်ဦးရှိပြီး မေ